Factory Of Oxygen Generator Laser tingcha | Obere Ìhè & Okpomọkụ Osisi Osisi Okpu - Hangzhou OuRui Air Nkewa Ngwá Ọrụ Co., Ltd.
Nabata ma ọ bụ
Hangzhou OuRui Air Nkewa Equipment Co., Ltd. bụ ọkachamara emeputa nke cryogenic ikuku nkewa, VPSA oxygen mmepụta ngwaọrụ, abịakọrọ ikuku ọcha ngwaọrụ, PSA nitrogen mmepụta, oxygen mmepụta ngwaọrụ, nitrogen ọcha ngwaọrụ, akpụkpọ ahụ nkewa nitrogen mmepụta na oxygen mmepụta ngwaọrụ, eletrik. Ogwe njikwa Pneumatic. Ogwe njikwa okpomọkụ. Ebipụ valvụ mmepụta ụlọ ọrụ.The ụlọ ọrụ nwere ihe karịrị 14000 square mita nke oge a ọkọlọtọ ogbako, na elu ngwaahịa ule equipment.Company mgbe niile rube isi na "ịkwụwa aka ọtọ, imekọ ihe ọnụ, mmeri-mmeri" azụmahịa nkà ihe ọmụma, mmepe nke sayensị na nkà na ụzụ, ọgwa , nnukwu-ọnụ ụzọ, na ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke elu na nkà na ụzụ mmepe, na enterprise mechaa ISO9001 quality usoro asambodo, ma merie ndị "contracts na-ekwe nkwa unit", ụlọ ọrụ na-edepụtara dị ka onye nke elu na nkà na ụzụ ọhụrụ ụlọ ọrụ na zhejiang n'ógbè isi ụlọ ọrụ nke sayensị na nkà na ụzụ ọhụrụ.
Ngwaahịa ụlọ ọrụ ahụ were "OR" dị ka ụghalaahia edenyere.
The ụlọ ọrụ nwere ihe karịrị 14000 square mita nke oge a ọkọlọtọ ogbako.
Enterlọ ọrụ ahụ agafeela asambodo asambodo ISO9001.
Maka ogo nlanarị, gbadoro ahịa, sayensị na teknụzụ maka mmepe, njikwa iji mepụta arụmọrụ, ọrụ iji nweta ntụkwasị obi.
The ụlọ ọrụ na ngwaahịa na-abịakọrọ ikuku dị ka akụrụngwa, site na akpaghị aka usoro, abịakọrọ ikuku ọcha, nkewa, extraction.The ụlọ ọrụ nwere isii usoro nke abịakọrọ ikuku ọcha ngwá, PSA PSA PSA ikuku nkewa ngwá, nitrogen na oxygen ọcha ngwá, akpụkpọ ahụ nkewa ikuku nkewa akụrụngwa, VPSA oxygen mmepụta akụrụngwa, cryogenic ikuku nkewa akụrụngwa na akpaka valves, na ihe karịrị 800 nkọwa na ụdị.
Ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ na-ewere "OR" dị ka ụghalaahịa edenyere aha, nke a na-ejikarị eme ihe na coal, ike eletrọniki, petrochemical, nkà mmụta ọgwụ, roba, akwa na eriri kemịkal, nchekwa nri na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, ngwaahịa n'ọtụtụ isi mba na-arụ ọrụ.
COMlọ ọrụ na-ewe
Ihe onye ọrụ chọrọ dị ka ebe mkpesa, mmepe mmekọrịta ọha na eze dị ka ebumnuche, yana afọ ojuju onye ọrụ dị ka ọkọlọtọ
Ulo oru ulo oru bu
"Ruo ogo nlanarị, gbadoro ahịa, sayensị na teknụzụ maka mmepe, njikwa iji mepụta arụmọrụ, ọrụ iji nweta ntụkwasị obi." Gbalịsie ike iru ụkpụrụ mba ụwa na ogo, ọrụ, njikwa, teknụzụ na akụkụ ndị ọzọ. Na ngwaahịa "OR" , mepụta ọfụma maka ndị ọrụ, kpokọta akụ na ụba maka ọha mmadụ, ma jikọọ echi ka mma.